Mpizahatany 24 no matin'ny lozam-pifamoivoizana tao Tonizia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mpizahatany 24 no matin'ny lozam-pifamoivoizana tao Tonizia
Olona efatra amby roapolo no matin'ny lozam-pifamoivoizana tao Tonizia. Tizy Ministry ny Atitany anatiny Toniziana dia nitatitra fa 22 ny olona maty, 21 kosa naratra tamina lozam-pifamoivoizana tamina bus mpizahatany iray. ARaha ny filazan'ny masoivoho dia nivadika ny bisy ary nisintona tao anaty hady.
Nisy olona 43 tao, ny ankamaroan'izy ireo dia mpianatra sy mpianatra izay nandeha dia lavitra tany ivelan'ny tanàna. Avy any an-drenivohitr'i Tonizia ny bus, an'ny iray amin'ireo masoivohon'ny fizahantany tsy miankina.
Na eo aza ny fandrakofana amin'ny fantsom-baovao sasany, toa tsy nisy mpitsidika vahiny anisan'ireo niharan'izany.
Nankany amin'ny tanànan'i Ayn Darahim ny fiara fitateram-bahoaka, tany avaratra andrefan'ny firenena no nitrangan'izany. Raha ny fampitam-baovao Toniziana dia nitsidika ny toerana nitrangan'ny loza ny filoha Kais Saied.
Ny parlemanta toniziana dia namoaka fanambarana mangataka ny minisitry ny atitany anatiny sy ny fahasalamana hanara-maso ny asa famonjena ary hanome fanampiana ara-nofo sy ara-tsaina ho an'ireo fianakavian'ireo niharan'izany loza izany. Ny Minisiteran'ny Fahasalamana kosa dia nanambara fanentanana fanomezana rà nasionaly ho an'ireo traboina.
Vintana farany hitsidihana an'i Victoria Falls alohan'ny maina?
Nirehitra ny tanàna UNESCO World Heritage tao Aostralia